5 esomedị ​​F5 Tornado dị egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke mmiri ozuzo na-amasị anyị. Anyị na-ahụ ha na telivishọn na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ na akụkọ, ma anyị chọrọ ịhụ ka ha na-ebi ndụ, mana… ọ dị ka maka ugbu a naanị anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha egwu ma ọ bụrụ na anyị gaa United States.
Ma echegbula. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịga maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, ebe a ka anyị hapụrụ gị vidiyo nke 5 egwu F5 tonado formations.
Na anyị ga-, n'ezie, na-amalite na "ọmụmụ" nke tonado. Ihe omume ndị a bụ nsonaazụ nke ikuku ikuku abụọ kpamkpam (na ala oyi akwa ikuku ga-ekpo ọkụ, ebe na oyi akwa ha ga-ajụ oyi), nke na-eme ka ikuku ikuku na-agagharị na gburugburu, wee si otú a na-ebute Nwunye Na vidio a nke Brad Hannon ị nwere ike ịhụ, na nkwụsịtụ oge, otú e si guzobe nnukwu anụ ahụ, "progenitor" - ọ bụrụ na m nwere ike ikwu ya - nke ihe a. Ọ dị egwu. Edere ya na June 3, 2003, na Booker (Texas).
Ichere ma ọ bụrụ na anyị abịarukwuo nso?
Guysmụ nwoke ndị a sitere na usoro nchọpụta a ma ama Stormcatchers dị ezigbo nso. Ọfọn n'ezie, ntakịrị ihe abanye n'ime, n'ụzọ nkịtị. Ikuku na-efe na ihe karịrị 220km / h. Edere vidio a na June 17, 2009, na Aurora (United States).
Ma ugbu a, m jụọ gị ajụjụ, gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na tonado na - abịa?
Ọfọn, mmeghachi omume kachasị mma ga-apụ maka ụkwụ, mana ọ bụrụ na ihe ndị a masịrị gị, ị ga-ama nke ahụ ikwesighi ịbịaru nso karịa 2km. Dị ihe na-erughị ya pụrụ itinye ndụ gị n’ihe ize ndụ. N'agbanyeghị nke ahụ, onye edemede nke vidiyo ahụ, Jeff Lechus, na ndị otu ya dere oke ifufe a na May 20, 2013, na Moore, Oklahoma.
Ha biakwara nnọọ nso:
Na-anụ ka nwoke ahụ na-ekwu "chi m Chukwu", "Oh my God". O loro otu ụlọ.
Anyị ejedebe vidiyo dị egwu, ebe ị nwere ike ịhụ guzobe nke a tonado site na mgbe ọ malitere ịhapụ supercell ruo mgbe ọ na-emetụ ala ma mesịa gbazee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » 5 egwu F5 tonado formations
Mgbanwe ihu igwe na El Niño ga-egbu mmadụ nde 10